Hebei juren na -ebuli akụrụngwa na ụzọ mmezi oge opupu ihe ubi na ọkọchị
Ọ dị mma izute gị ndị enyi m niile! Ngwa na -ebuli elu na -aga izute oke mmiri ozuzo na -agba agba, oke ọkụ nke oge ọkọchị. Yabụ na anyị kwesịkwara ịkpachara anya iji ghọta ụfọdụ usoro mmezi akụrụngwa n'èzí. Cranes, scaffolding, cranes na akụrụngwa ndị ọzọ na ikpughe anyanwụ na -ekpo ọkụ, ụlọ na -anọdụ ala ...
Juda akara PA
A na -akpọkwa obere ọkụ eletrik eletrik eletrik obodo. Ọ bụ ụdị ihe na -ebuli elu, nke kewara ekewa n'ime obere ihe mkpuchi ụlọ na obere ihe nrụpụta ụlọ ọrụ, nwekwara ike kewaa ya na eriri eletriki obere eriri na eriri elektrik pere mpe. Micro eletriki hoist dị ka ọhụrụ ...
Usoro ndozi eriri eletriki
site na nchịkwa na 21-07-16
1, ekwesịrị iji mmanụ na-ete nchara kpuchie elu eriri eriri ahụ, n'ọnọdụ adịghị arụ ọrụ, a ga-ekpuchi ya na tarpaulin ma ọ bụ ihe nkiri plastik. 2, eriri eriri eletriki igbe igbe, ekwesịrị iji mkpuchi mmanụ nwere mmanụ nwere barium sulfonate antirust griiz, na mgbe niile ...
Akara ngwa eletriki eriri eletriki?
Igwe eriri eletriki eriri igwe bụ ụdị ngwaahịa na -ebuli elu, nke ndị mmadụ na -eji eme ihe, yabụ kedu ohere itinye eriri eletriki eriri, ihe na -esonụ bụ nnukwu ihe mejupụtara iji nye mmeghe dị mfe: 1. eriri eletriki waya A na -eji hoist maka ịkwanye, ịkwanye na ịkwanye ...
Kedu otu esi ekpe ikpe ịdị mma eriri waya eriri nko?
Igwe eriri eletriki eriri igwe bụ ngwa ọrụ na -ebuli elu, ọ bụ ndị ọrụ na -arụ ya, yabụ, n'iji eriri eriri, a ga -enyocharịrị ya tupu. Dịka otu ngwa mma ọkụ eletrik, nko na -arụ ọrụ dị mkpa n'iwelite ihe dị arọ. Mgbe ahụ na nhọrọ nke nko, gịnị ...
Juda ika PA - pịnye obere ọkụ eletrik na -agbatị agbatị
Otu esi emeso igwe eletriki eletrik enweghị ike ịkwụsị
site na nchịkwa na 21-07-15
A na -akpọkwa obere ọkụ eletrik dị ka ihe ọkụ eletrik obodo. Ọ dabara maka ịkwalite na ibudata obere ngwongwo n'oge dị iche iche. Ọdịdị dị mfe, nrụnye dị mfe, obere na ọmarịcha, yana iji ọkụ eletrik otu-oge dị ka isi iyi, iji ụdị ọkụ eletrik ọhụrụ a ...
Kedu ka e si emerụ eriri waya gburugburu drum ahụ?
Onye ọ bụla maara na eriri eletriki eriri igwe ga -eburu nke mbụ bụ eriri waya, yabụ, iji hụ na eriri eriri ahụ merụrụ nke ọma na mkpọ, ka o wee nwee ike rụọ ọrụ nke ọma. Enwere ike ekewa winding nke eriri waya na mkpọ ahụ n'ụdị ụdị akwa na akwa akwa. Ndị ...
Kedu uru nke yinye?
Ikwanye aka bụ ihe dị mfe, dị mfe iji rụọ ọrụ mbuli elu, na-eme ka arụmọrụ ka mma nke ukwuu, chekwaa ọrụ na isi obodo, yabụ kedu uru ya, ihe ndị a bụ mmeghe dị mkpirikpi sitere na nnukwu hebei: Uru nke gourd ejiri aka mee: 1, obere aka dọpụrụ , akụkụ ike dị elu 2. Ọdịdị dị elu ma bụrụ ...
Kedu ka esi ejikwa yinye?
Hebei ibu hoisting otu bụ ọkachamara emeputa nke aka-adọkpụpụta gourds, aka-wetara gourds, eletriki gourds na na. Anyị makwa ka esi ejikwa gourds ejiri aka dọpụta. Ndị na-esonụ bụ mmeghe dị mkpirikpi sitere na nnukwu hebei: Anyị niile maara na ogiri-aka ejiri aka mee tupu na mgbe ejiri ya bụ ...
A na -ewebata nnukwu: kee isi asatọ maka nlebara anya
Nke mbụ, a machibidoro iwu oke ibu ókè. Nke abụọ, amachibidoro ya iwu iji ihe ọzọ karịa ọrụ ike mmadụ. Nke atọ, ọ bụrụ na onye na -ahụ maka ọrụ achọpụta na mgbagha aka karịrị akarị nkịtị, kwesịrị ịkwụsị ozugbo. Nke anọ, na usoro ibuli elu, n'agbanyeghị oke arọ ...
Kedu ka esi ejigide yinye?
Anyị ga-echekwa ihe niile ka anyị jichara ya, ekwesịrị idobe ya nke ọma tupu nchekwa, nke nwere ike ọ bụghị naanị ịbawanye ndụ nke osisi gourd ji aka, kamakwa nye nkwa dị mma maka ojiji ọzọ. Mgbe ahụ ka esi ejigide gourd aka-adọkpụrụ mgbe ejiri ya? Ihe na -esonụ bụ nyocha nke th ...
Igwe ọkụ eletrik eletrik, Micro Electric eriri eriri, Ntuziaka Lever Chain ndoli, Bannon Electric Hoist, Lever Puller, Jet 1.5 Ton Chain ndoli,